N'August, Softchoice ziga a ahịa na ndị ahịa ha na natara 1,444 dechara Ibọrọ na-anọchite anya ihe karịrị 1,200 obere na-ajụ-ulo oru (SMB), enterprise, ọha mpaghara na agụmakwụkwọ òtù. 71% nke ndị zaghachiri nọ na IT na ihe nlele ahụ bụ 50% US na 50 pasent ndị otu Canada - yabụ onye nnọchianya nke mpaghara azụmahịa North America.
Tags: b2bahịa b2bEducationazụmahịa ụlọ ọrụitMari Smithdị ọkara ahịaMTB Redioụlọ ọrụ ọha na ezeMmekọrịta Mmekọrịtaobere azụmahịaSMBsoftchoicennyocha e merenyochaa nyocha
Doug, nke a bụ ihe ngosi mmịfe bara uru na mmelite vidiyo na nyocha Softchoice (ọ bụ ezie na ọ dị m ka ọ dị ntakịrị 'brik na' site na nhọrọ nke gburugburu ha lol)
Mgbe ụfọdụ, m na-eche ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na-enye ohere ịnweta FB na Twitter site na desktọọpụ / laptọọpụ nke ndị ọrụ. Enwere nsogbu nchekwa dị iche iche, ihe egwu dị egwu na azụmaahịa arụpụtaghị ọrụ iji mee nke a. Ikekwe nke ahụ na-ebuwanye ụba nke smart phones iji nweta ngwaọrụ ndị a, mgbe firewalls Internet 'ụlọ ọrụ' anaghị ekpochi ha?
Site na nchịkọta slideshare m họpụtara ntanye # 8 ka ọ na-ekwu okwu nke ọma na nyocha ụwa nke ndị ahịa b2b tech. Nzaghachi asaa ahụ e hotara na-ezo aka na ozi ahịa ozi ịntanetị zigara, mana enwere ike itinye ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ahịa ọ bụla ọzọ na-enyere aka ịkụziri ma zụlite mmekọrịta azụmahịa na ezigbo mmadụ. Cheta ndị ahụ!
Ka smart phones (na mbadamba) na-abawanye na ụlọ ọrụ ụwa, ọ dị ka mkpụmkpụ, na-etinye "infographic" iberibe nwere ike ịbụ a họọrọ ụzọ adọta eyeballs na eardrums ka a ọzọ tụrụ na zuru ezu ọmụma mgbanwe eg webinars na-akwado e dere ọdịnaya.
Ọtụtụ na-eche banyere. Daalụ maka ịkekọrịta.